Nolalaovina toy ny ‘kabuki’ ilay sarimiaina ‘Nausicaä’ malaza be avy any Japàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2019 16:46 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Italiano, Español, русский, Esperanto , bahasa Indonesia, English
Ny printsesa Nausicaä sy Ohmu iray ao anatin'ny famokarana seho kabuki iray vaovao ny asan'i Miyazaki Hayao “Nausicaä an'ny Lohasahan-dRivotra. Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtuba Oricon.
Ny Desmabra 2019, lalaovina an-tsehatra toy ny kabuki ny iray amin'ireo tantara malaza indrindra ao Japàna . Noforonin'ilay Japoney tale malaza, sady mpanentana no mpitantara, Miyazaki Hayao, Nausicaä of the Valley of the Wind – Nausicaä an'ny Lohasahan-dRivotra – (風の谷のナウシカ, Kaze no Tani no Naushika) voalohany naseho tamin'ny endrika andiana ‘manga’ nanomboka tamin'ny 1982, ary avy eo toy ny sarimihetsika nahita fahombiazana tamin'ny 1984 izay mbola malaza eny anivon'ireo mpanaraka eran'izao tontolo izao hatramin'izao.
Ny dika kabuki avy amin'ilay Nausicaä dia nolalaovin'ny tarika iray tsy nahitàna afa-tsy lehilahy fotsiny nisongadinan'ireo malaza amin'ny filalaovana kabuki : Onoe Kikugorō V sy Nakamura Shichinosuke II. Onoe no nitàna ny toeran'i Nausicaä, ilay vehivavy mitàna ny toerana voalohany ao anatin'ny tantara, raha i Nakamura kosa no i Printsesa Kushana, ilay mifanandrina aminy. Ny 6 Desambra, nanomboka ny diany tao amin'ny Shinbashi Enbujo ao Tokyo ilay tantara an-tsehatra, ary hitohy hatramin'ny 25 Desambra.
Afaka hita ao amin'ny YouTube sy Twitter ny famintinana fohy an'ilay dika kabuki :
Misokatra ao Japàna rahampitso ny filalaovana an-tsehatra ny ‘Nausicaa” amin'ny endrika kabuki’.https://t.co/0tcRvmYhxX
Isaorana i @ButaGhibli tamin'ny rohy. pic.twitter.com/YfJlzhefVb
Napetraka ao anaty hoavy manaraka ny vanimpotoana apokaliptika, na ilay ‘manga’ na ilay dika nohetsehina tamin'ny Nausicaä of the Valley of the Wind dia samy milaza ny tantaran'ireo ezaky ny Printsesa Nausicaä hampitandrina ny zanak'olombelona tsy hanimba tena sy ireo endrika fiainana rehetra sisa tavela eo amboninà tontolo iray voapoizina, sy tena tsy mahatamàna. Toy ireo rehetra asa novokarin'i Miyazaki, mampiasa hevitra foromporonina ny Nausicaä mba hitrandrahana ireo lohahevitra mifampidimpiditra momba ny tontolo iainana, ny fandalàna fahalemana, ary ny tsy fahombiazan'ny zanak'olombelona sy ny tsy fahalalana onony ananan'ny olombelona.
Miyazaki Hayao dia iray amin'ireo mpanoratra tena malaza indrindra ao Japàna. Ny mpanorina ny Studio Ghibli, ireo vokatra tena malaza indrindra an'i Miyazaki, na ao anatiny na any ivelan'i Japàna dia ahitàna ny “i Totoro mpifanolobodirindrina amiko” sy ny “Spirited Away”. Tany amin'ny faramparan'ny andian-taona 1960 tany i Miyazaki no nanomboka namokatra ny andianà manga nataony, izay taty aoriana dia nitondra ho amin'ny famokarana ny andian-tantara Nausicaä.
Nausicaä of the Valley of the Wind (風の谷のナウシカ) dia manga (tantara an-tsary) lavabe nataon'i Miyazaki Hayao ho andiany, natonta voalohany tamin'ny 1984. Sary an'i Nevin Thompson.
Nausicaä dia holalaovina manomboka ny 25 Desambra 2019 ao Tokyo. Hanaraka ny famokarana kabuki mitovitovy aminy avy amin'ny Star Wars, izay azo jerena ety anaty serasera ao amin'ny YouTube.